Hazigharia, degharia ma weghahaa ọdịnaya | Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 21, 2014 Douglas Karr
A na-enwekarị nnukwu ọchịchọ maka ọdịnaya ọhụrụ na ọtụtụ n'ime anyị na-agbasi mbọ ike ide ihe ederede na-enye ndị na-ege anyị ntị uru. Nke a ozi sitere na Marketo na ịnọgide na-enwe nnukwu ọdịnaya bụ ndụmọdụ siri ike.
Hazigharia - Enwere m ike iji repurpose dị ka okwu maka nke a, mana anyị na-ejikarị nyocha, akụkọ na eserese gafee usoro dị iche iche nke ndị na-ajụ ase ka anyị na-emepe ọdịnaya. Anyị nwere ike ịme nyocha maka webinar, mana deekwa akwụkwọ edemede na-eso ya na ozi nnọchite anya na post blog iji kwalite ha. Ọ bụghị onye ọ bụla na-agbari ọdịnaya n'otu ụzọ ahụ, yabụ ịkọ akụkọ gị na ịkọwa ha n'ofe ndị na-ajụ ase dị oke irè.
Tinyegharịa - anyị nwere ụfọdụ ederede na teknụzụ nke mepụtara n'ezie. Kama ide ọhụụ ọhụrụ na mgbanwe nke ngwaahịa a, ugbu a, anyị na-akwalite ihe izizi mbụ ma melite ha. Enwere nnukwu uru na ime nke a - site n'ịnọgide na-eguzosi ike n'ezi ihe nke URL ahụ, enwere ike ịgbakwunye ọnụ ọgụgụ mmekọrịta na mmekọrịta ọ nwere ike ọ bụghị naanị ijide ya, mana ọ ka mma karịa ma ọ bụrụ na edepụtara post ahụ nke ọma!
Gbaghaa - nke a siri ike, mana anyị emeela ya. Anyị dị mfe karịa posts 5,000 na saịtị a mana ọ dị mfe karịa 1,000 posts ndị na-adịghị mkpa ma ọ bụ na-enweghị oge. Somefọdụ bụ ihe ndị mere n’oge gara aga, ndị ọzọ bụ teknụzụ ochie, na ndị ọzọ bụ ngwaahịa ndị na-adịkwaghị. Eziokwu na i wepụtara oge dee ihe iji hichapụ ya mechara na-ewetara m anya mmiri… mana ọ ga-akara m mma ka ọdịnaya m gbado anya na isiokwu ndị ka bara uru.
Usoro ndị a abụwo akụkụ nke usoro mmezi zuru ezu anyị malitere nke rụpụtara na nke anyị okporo ụzọ na-eme njem ụgbọ ala karịa afọ. Nwere ike iche banyere otu ị ga - esi mepee usoro mmezi maka saịtị gị nke na - achọpụta na ọdịnaya gị niile dị mkpa na oge!
Tags: mmezi ọdịnayaahịainfographic ahịahazigharia ọdịnayalara ezumike nkádeghari ọdịnaya
7 Ajụjụ ịjụ gị Agency Tupu ị banye